Ahoana ny fomba hampianarana alika handeha tsy misintona ny tadim | Tontolo alika
Ny alika dia iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviana mahazatra indrindra an'ny fiarahamonintsika. Manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia azo atao ny mahita kilasy sy / na firazanana ao an-trano ary ankehitriny, alika Izy ireo no voalohany ao amin'ny lisitry ny namana ao an-trano.
Ny fitondran-tenany matetika dia tsara dia tsara, satria tsy mitaky ezaka be vao ho zatra, izay manolotra ny tompony ihany koa ny mety hisian'ny mpiambina trano, izay tsy hitaky afa-tsy sakafo sy fitiavana nandritra ny fotoana ela nijanonany. Na izany na tsy izany, ny alika dia afaka mizatra amin'ny fomba mandaitra amin'ny tranon'olombelona.
1 Mampianatra alika handeha amin'ny tadiny
2 Torohevitra mba tsy hisintoman'ny alikanao ny fehy
Mampianatra alika handeha amin'ny tadiny
Ny iray amin'ireo lahasa lehibe izay ataon'ny tompona alika amin'ny biby fiompy dia ny mitsangatsangana, na manao fanatanjahan-tena, mankafy mandeha an-tongotra na hotarihin'ny alikao (ireo mpahita fahitana).
Amin'io lafiny io, ny ampahany amin'ireo fanontaniana mahazatra indrindra mety hipoitra mandritra ny dia an-tongotra miaraka amin'ny alika dia:Ahoana no ahafahako manakana ny alikako tsy hisintona ny tadiny? Mety hipoitra noho ny antony maro ity olana ity: mahery setra ny alika, mety very ny alika, na amin'ny tranga fahitana olona, ​​tsy tian'ny olona ho very ny alik'izy ireo.
Amin'io lafiny io dia hanolotra ity lahatsoratra ity toro-hevitra vitsivitsy hampianarana alika handeha tsy misintona ny tadiny, amin'ny fomba ahafahan'ny mpamaky mampihatra azy ireo amin'ny fampiharana, amin'ny fitadiavana ny fiatrehana an'io toe-javatra mahazatra io amin'ny alika rehefa mandeha mamaky toerana malalaka.
Alohan'ny hilazana ireo toro-hevitra horaisina dia ilaina ny mampahafantatra ny mpamaky fa ny iray amin'ireo lafin-javatra lehibe indrindra tafiditra eto dia ny fiompiana alika.
Ny fitaizan-jaza no vanim-potoana izay ny olona miandraikitra ny alika no mamolavola ny fihetsiny, fanamafisana ny fitondran-tena mety sy fanasaziana ireo tsy mendrika. Na dia, araka ny fantatsika aza, dia izany foana no zava-misy, satria afaka mijery tranga izay tsy misy fifehezana ny fihetsiky ny alika amin'ny tompony isika, mamela ny alika hanao izay tiany nefa tsy misy famantarana alàlana lehibe indrindra, izay, vokatr'izany miteraka, repertoire amin'ny fitondran-tena izay sarotra atrehana fa rehefa mihalehibe antitra ny alika.
Izany no antony tsy maintsy dinihin'ny mpamaky ny fiompiana alika ho toy ny singa fototra rehefa te-hanao fanovana maharitra amin'ny fihetsiky ny alika. Tsy tokony hafangaro ny mpamaky satria ny fihetsika izay azo mandritra ny fiompiana dia azo ovaina, fa ny tsy maintsy raisin'ilay mpamaky dia ny sarotra kokoa ny manafoana ny fitondran-tena mahazatra noho ny fihetsika vao haingana.
Torohevitra mba tsy hisintoman'ny alikanao ny fehy
Tsy misy ambara intsony, toro-hevitra vitsivitsy ho mampianatra ny alika tsy hisintona ny tadiny Izy ireo dia mety:
Rehefa manandrana mandroso ny alika dia tsikaritray fa izany miteraka fihenjanana amin'ny fehikibo, ny tompony dia tsy maintsy mijanona ary miandry ny alika hiverina any amin'ny toerantsika, amin'ny fomba izay mianatra tsy handroso, satria tsy avela izany. Tokony hatao izany na inona na inona valintenin'ny alika, satria tsy miovaova izay mamaritra ny fiovan'ny fihetsiky ny alika.
Raha manandrana mandroso ny alika dia afaka manova ny tontolo avy hatrany ny fihodinana 180 degre. Amin'izao fomba izao, ny alika dia tsy maintsy mialoha ny asany alohan'ny handrosoana. Ny hevitra dia ny manao izany im-betsaka araka izay ilaina mandra-piverin'ny alika miaraka amintsika nefa tsy manohitra firy ny fihodinana.
Safidy iray hafa horaisina dia ny mametraka ny tenantsika eo alohan'ilay alika ho vato misakana rehefa manandrana misongona ny alika, mety mametraka ny fahefantsika momba an'io. Toy ny amin'ny tranga rehetra dia ilaina ny manao an'io matetika araka izay ilaina.
Ireto misy fiheverana vitsivitsy fomba fanao hampiofanana ny alikantsika amin'izay izy mianatra mandeha miaraka amintsika amin'ny fomba fahalalam-pomba.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hampianarana alika handeha tsy misintona ny tadiny
Ana Luisa Dapik Pozo dia hoy izy:
Manana alika 3 aho ary rehefa sintomiko miaraka izy ireo dia mampivarahontsana ahy mandritra ny diany manontolo. Inona no azoko atao ?????
Valiny tamin'i Ana Luisa Dapik Pozo
Salama Ana Luisa,
Ny zavatra tsara indrindra dia ny ahafahanao misintona azy ireo amin'ny andiany. Izany hoe, roa aloha ary avy eo hampidina ny fahatelo na ny mifamadika amin'izany.